Nhau - Disposal Yemunhu Mask
Ungasarudza sei kuraswa pachako chifukidzo?
Kune masiki ekurapa, vagari vane hanya vanogona kusarudza kupfeka zvinoraswa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo sterilization level uye yakajairika nhanho yakamonyorwa pane yekunze kurongedza kweanachiremba ekurapa mamask anoreva kuchena kwemasikisi pachawo, izvo zvisina chekuita nekusefa mhedzisiro.
Yakagadzirwa kabhoni masiki inosvinwa neyakagadziriswa kabhoni mumasikisi, uye iyo kabhoni yakamisikidzwa haina basa kanoverengeka, saka inoda kuchinjaniswa mazuva ese.
N95 uye N90 ndeye chiyero chekudzivirira. "N" zvinoreva kuti haina kukodzera chinhu chine mafuta; "95 ″ zvinoreva kuti, pasi pemamiriro ekuonekwa anotsanangurwa muyakaenzana, kugona kwekusefa masende ane saizi yechimedu ye0.3 microns inosvika 95%.
Kupfeka KN95 maski kunogona kubvisa njodzi yehutachiona hutachiona zvachose?
Kupfeka KN95 masiki nenzira kwayo kunogona kudzikisira hutachiona zvakanyanya, asi hazvireve kuti kupfeka chifukidzo kunogona kubvisa njodzi yehutachiona zvachose.
Zvinokurudzirwa kuti ugare wakaomarara nekudzivirira uye kuzviparadzanisa zvinodiwa nehurumende panguva yedenda mamiriro acho. Pfeka masiki nenzira kwayo uye chengetedza hutsanana nemaoko.
Kupfeka masiki akawanda kunodzivirira zvirinani kutapukirwa nehutachiona?
Kwete. Pfeka nenzira kwayo kuti uone kukakavara uye kusagadzikana kwemhepo. Chete N95 neKN95 maski ndiyo inogona kuwana chinodiwa chekudzivirira. Akawanda masiteki kwete chete anokonzeresa kuve akasakwana kukwana, asi zvakare kuwedzera kufema kusagadzikana uye kusagadzikana.
Sezvo America inodzokera kubasa, tinofanirwa kuita zvinopfuura kungozvichengeta isu takachengeteka. Tinofanira kuchengetana. Ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vakapfeka masks ekumeso ... saka havazoparadzira hutachiona kune vamwe vanhu kana vakatapukirwa. Izvi zvinoreva kuti, kana iwe uchida kuzvichengeta iwe nevako vaunoshanda navo makachengeteka, munofanirwa kuendesa iwo masks ekumeso kune vako vatengi, vatengesi vako, vanhu vanogovana bhazi kana chitima navo, uye chero munhu wavangasangana naye mukati zuva. Neraki, isu tine kumeso kumeso uko kunongopa chete kudzivirirwa kukuru, asi kunogona zvakare kurairwa zviri nyore muhuwandu huwandu.
Iyo Inoraswa Yemunhu Inodzivirira Chiso Mask kubva kuMhando Rangu Zvigadzirwa maficha:
Zvikamu zvitatu zvekudzivirirwa kubva kuguruva, mabhakitiriya, madonhwe, uye kusvibiswa kwemhepo
kugadzikana, kugadzirwa kweganda
elastic earloops zvinoita kuti zvive nyore kuisa kana kubvisa
chinogadziriswa mhino bhiriji mutsetse
hutachiona filtration kushanda kweanopfuura 95%
Iyo Inoraswa Yemunhu Inodzivirira Kumeso Mask inogadzira inoshamisa chinongedzo kune chero sangano kana bhizinesi nekuti isu tese tiri kuyedza kuchengetedza mumwe neumwe kuchengetedzeka. Raira rako nhasi.
Milcoast 3-Ply Layer Disposable Face Masks inogadzirwa neyakagwinya, mhando yepamusoro, uye chaicho mbishi zvigadzirwa. Masiki edu ndeyekushandisa zvakanyanya uye akakwana kuti ubude pachena, muhofisi, kushopu, kudya, kushanda, kufamba, uye kudzivirirwa kwese kwese.
Yakagadzirwa nemhepo inofema 3-ply materu: jira rekutanga risina-rakarukwa jira, yechipiri dhizaini yakanyungudika-yakaputirwa jira, yechitatu nhete isina-yakarukwa machira. Chifukidzo chimwe nechimwe chiri nyore kupfeka uye kubvisa neyakareba uye inoshanduka elastic band. Iyo yekupeta contour dhizaini yemask inokodzera kumeso zvakanyanya. Paunenge wapedza kushandisa maski, ingo bvisa mask uye uikandire kure.
Yedu kumeso masiki inoenderana nehurumende mask chinodiwa mvumo uye yakanakira kufamba kwendege, nhandare dzendege, carpools, kukwira-kugovana, kufamba kwemotokari, bhazi nechitima kukwira, uye kufamba kwakawanda.
Kubatsira kumisa kupararira kweiyo COVID-19 coronavirus, ndapota pfeka kumeso kumeso kana uri paruzhinji uye dzidzira kushamwaridzana kure.
Ruvara: Chiedza Bhuruu
Kukura: 17.5cm x 9.5cm
Chinyorwa: 3 ply isina-yakarukwa machira uye yakanyungudika-yakaridzwa jira
Ongorora: Haiitirwe zvekurapa. Izvo hazvina kuratidzwa kudzikisira hutachiona hwechirwere.